IMagneto isungula uhlobo olutsha lwebhodi yayo ende yombane | Iindaba zeGajethi
Ngamaxesha aliqela sithethile ngeebhodi ezinde zombane ezikhoyo kwimarike yangoku kwaye kuyinyani ukuba ezi bhodi zide azenzelwanga bonke abaphulaphuli nokuba zingakanani izinto zokudlala ezibonakala ngathi. Ngesi sihlandlo inkampani IMagneto isungule ingxelo yesibini ephuculweyo yebhodi yayo ende yombane kwaye kungcono ukuba
Sisithuthi sombane ukuhambahamba esixekweni ngendlela ezinzileyo kunye nolonwabo, kodwa lumka, kuba ezi bhodi zide zifikelela kwisantya esiphezulu kwaye sizimise kwangoko akukho lula ukuba asiqhelanga ukusetyenziswa kwazo. Omnye wabo wakhuthaza ukusetyenziswa kwezi bhodi zide zombane yayiyindawo eyaziwayo ye-Youtuber Casey Neistat, kodwa usebenzisa uphawu olungekho kuzo zonke iipokotho.
Utshintsho kwiMagneto entsha
Ngeli xesha iMagneto entsha ikhula ngandlela zonke, kodwa ngaphezulu kwako konke ngamandla. Sifumanise ukuba iinjini zibandakanyiwe kwiivili, ewe, Sitshilo iinjini kuba inyusa ezimbini endaweni enye. Kule meko yi-350W Dual Hub eyinika isantya esiphezulu se-28 MPH (kuxhomekeke kubunzima bomntu oyisebenzisayo) esiba malunga ne-45 km / h.
Ukongeza, uyilo lutshintshile ngokuthelekiswa nohlobo lwangaphambili kunye nebhodi ende ngoku inemilo eyahlukileyo nangona yenziwe ngomthi waseKhanada owenziwe ntsha kwakhona. Ubomi bebhetri bumalunga neekhilomitha ezingama-25 kuxhomekeke emntwini kunye nomhlaba ngokugcwalisa Ukutshaja ngokupheleleyo kwiiyure ezingama-2-3 kwaye kunokutshintshwa ngokulula ngumsebenzisi.
Iseti inobunzima malunga ne-7 Kg, engatshintshi ngokubhekisele kuhlobo lwangaphambili, kodwa ukuba iyakwazi ukuya phambili nangasemva ngokulawula ibhodi ende. Indawo ekude iqhagamshelwe ngeBluetooth 2.4 kwaye inokutsha kwakhona kusetyenziswa intambo ye-microUSB kwaye siya kufuna iadaptha yekhebula njengoko iza nemodeli yase-UK.
Zonke ezinye iinkcukacha zibhetele kuzo zonke iinkalo ukuze sikushiye kunye nazo:
Amanyathelo 920MM * 240MM * 13MM
Iivili ezingama-90 * 52MM, 85A eziPhezulu eziPhuma kwakhona kwi-Polyurethane
Ubungakanani bevili i-83mm ubukhulu / 52mm ububanzi
Ibhetri Samsung Ibhetri ephezulu yeLithium
36V, 4.4AH 20PCS iiseli ibhetri
Kulo Magneto iwebhusayithi esiyishiya kanye apha uya kufumana lonke ulwazi kunye neenketho zokuthenga kwesi sithuthi sombane sikhulu sine ixabiso le-590 euros.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » IMagneto isungula uhlobo olutsha lwebhodi yayo ende yombane
Ungawukhuphela njani umxholo kwiNetflix ukuze uwabukele nanini na, naphi na